Ukugcwaliswa Okuphuthumayo Kwebhange Lokuphuthumayo Ukuze Kumiswe Ukuthengiswa Kwembonakalo eNew Jersey naseNew York - Izakhiwo Nezindlu, i-NJ & NY, iTestate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuqothuka / Ukugcwaliswa Okuphuthumayo Kwebhange Lokuphuthumayo Ukuze Kumiswe Ukuthengiswa Kwembonakalo eNew Jersey naseNew York
August 22, 2017 Ukuqothuka, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York1 CommentUDerek Soltis
Misa Ukuthengiswa KweSheriff ngokugcwalisa Isicelo Sokuqothuka Esiphuthumayo ne-New Jersey Foreclosure Defense / Gqwetha Lokuqothuka Namuhla
Uma udinga ukumisa a ukuthengiswa kwembali, ukufayila a ukuphazamiseka incwadi yezicelo ngaphambi kokuthengisa izomisa ukuqulwa kwecala. Emahhovisi oMthetho kaPatel noSoltis singaba nesicelo sezimali esiphuthumayo esibhange ngalolo suku kulo lonke izwe laseNew Jersey. Lapho nje sesikufakela isicelo, sizokwazisa ihhovisi likaSheriff ngokugcwalisa ifayela ukuze kumiswe ukuthengiswa. Sinabameli be-Foreclosure abanolwazi ngemithetho yokuqothuka abakwaziyo ukuvikela ikhaya lakho. Asinabo nje kuphela abameli be-Bankruptcy, esinayo I-NJ Foreclosure Defence Attorneys okwaziyo ukusebenzisa izinkantolo zoMbuso ukuvikela ikhaya lakho. Sinikezela ngezixazululo eziningi kunokuqothuka nje.
Kungani Ungadinga Ukufayela Ukuqothuka Okuphuthumayo eNew Jersey?
Kwesinye isikhathi awunakukhetha futhi awukwazi ukukhokhela ukufaka isicelo sokuqothuka. Uma imali yakho iholo, ama-akhawunti akho asebhange ayakhokhelwa, noma kuthengiswa amasherifu udinga ukuthatha isinyathelo ngokushesha ukuze ugcine amafa akho. Singathatha isinyathelo ngokushesha ukukunikeza impumuzo oyidingayo yokumisa okokuhlobisa, ukumisa ama-akhawunti akho asebhange ukuthi angabizwa imali futhi ukumisa ukuthengiswa kwangaphambi kwesheriff yekhaya lakho.
Ngokuya ngesimo sakho singakwazi ukufakela abezimo eziphuthumayo Isahluko 7 Ukuqothuka noma oluphuthumayo Isahluko 13 Ukuqothuka. Uma une ukulingana ekhaya lakho noma awukwazi ukudlula Isahluko 7 sisho isivivinyo ungahle uvunyelwe ukufaka ifayili lokuqothuka kwe-Isahluko 13 noma iSahluko 11 Bankruptcy uma isikweletu sakho esivikelekile noma esingavikelekile singaphezu kwemingcele evunyelwe ngaphansi Kokuqothuka kweSahluko 13. Musa ukuchitha isikhathi sakho ukhuluma nomuntu ongeyena ummeli wokuthi ungasifaka kanjani isicelo sakho. Xoxa noMmeli Wokuqothuka KwamaNew Jersey ukuze uqiniseke ukuthi uvikela amalungelo akho.
Uma ufaka unethuba elilodwa lokukwenza kahle. Ungazifaki engcupheni yokuthi isicelo sakho sokuqothuka kwenqatshwe yiNkantolo Yokuqothuka, noma ufake uhlobo olungafanele lokuqothuka olungavumela umphathi ophethe ukuthengisa ngempahla yakho ukuze akhokhe obakweletayo. Khuluma nommeli onolwazi lokuqothuka oseNew Jersey noma eNew York City ukuthi abheke konke ongakukhetha ukuze ubone ukuthi ngabe ukuqothuka kuyindlela yakho efanelekile nokuthi ngabe kuyindlela efanele yini ukuthi iyiphi i-Bankruptcy ezovikela izimpahla zakho.
Uma sesifake isicelo Sokuqothuka, singazama ukuncishiswa ukulahleka kwebhange lakho njengokuhlela ukuguqulwa kwemali mboleko, i-dee-in-endaweni yokubonakaliswa ngaphambili, ukuthengiswa okufushane, noma ukuthengiswa okujwayelekile kwempahla yakho ukuze uhambe ngezimali ephaketheni lakho. Sizomela izintshisekelo zakho futhi sisebenzele ukufeza izinhloso ozifunayo. Sizokumela kuyo yonke inqubo yokuqothuka. Sizochaza konke okwenzekayo futhi sichaze nokuthi kuzokwenzekani. Sikunye nawe yonke indlela yendlela.
Sizosebenzela ukuthola imiphumela oyifunayo.
Ngaphambi kokuthi Ufake Isicelo Sokuqothuka Esiphuthumayo kudingeka ukuthi uthathe iNkantolo Evunyiweyo Yokwelulekwa Kwezikweletu.
Unemfuno efanayo yokwelulekwa kwesikweletu ku-Bank X Bank yokuqothuka kanye nokuqothuka kweSahluko 7 okudingeka ngokomthetho. Kunokuhluka okumbalwa njengokuthi kungani ungavunyelwa ekuthatheni ikilasi ngaphambi kokugcwaliswa. Kufanele uthathe isigaba sokululekwa yinkantolo esivunyelwe enkantolo. Uma ungena ehhovisi lethu ukuzosayina nathi ukukusiza, sizokumisa ukuthi uthathe ikilasi online noma ngefoni ngesiNgisi noma ngeSpanishi. Uma ungathanda ukuthatha ikilasi ngaphambi kokuhlangana nathi, sincoma Ukwelulekwa Kwezikweletu Okuphuthumayo. Le khosi ivame ukuthatha cishe ihora, futhi singaphendula noma imiphi imibuzo onayo mayelana nekilasi noma ukuthi yini abayibuzayo emibuzweni yabo uma uthatha isifundo ngenkathi ukulelinye lamahhovisi ethu. Silapha ukukusiza ngaso sonke isinyathelo senqubo yokuqothuka.
Sinikeza Ukubonisana kwamahhala ukuze udlule izinketho zakho zokuqothuka. Sishayele namuhla at (844) 533-3367 ukukhuluma noMmeli.
Pingback: INew Jersey idlulisa uMthethosivivinywa omusha Wokucashunwa Kwembangela entsha - i-NJ & NY Yezindlu, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy